Warshaddeena - Nanchang Shirkadda Caanbixinta Xaddidan ee Shirkadda Carbide
Ku saabsan NCC
Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company (NCC) waa shirkad ay dowladdu maamusho, oo asal ahaan ka soo jeeda 603 Plant oo la aasaasay bishii Meey 1966. Waxaa loo beddelay Nanchang Cemented Carbide Plant 1972. Waxay si guul leh dib ugu habeyn ku samaysay qaabkii lahaanshaha bishii Maajo 2003 si rasmi ah loo aasaaso Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company.It waxaa si toos ah u maamusha China Tungsten High Tech Materials Co., Ltd. Sidoo kale waa shirkad hoosaad hoosaad ka ah Shiinaha Minmetals Group Co., Ltd.
Haysashada silsilad warshadeed oo dhammaystiran oo ka timaadda alaabta ceeriin ee tungsten illaa dhammaadka qalabka wax lagu shiido, NCC waa mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee isku-darka wax soo saarka, maareynta iyo dhoofinta alaabada budada tungsten, ulaha carbide ee sibidhka ah, iyo qalabka jarista daloolka Shiinaha, alaabooyinkeeda ayaa ahaa aad loogu adeegsado birta, mashiinada, gawaarida, aerospace, macdanta dhulka, elektaroniga, iwm.
In kabadan 50 sano oo horumar ah, shirkadu waxay gaadhay awood wax soo saar sanadle ah oo ah 4,000 tan oo budada tungsten ah iyo budada tungsten carbide, 1,000 tan oo ulaha carbide ee sibidhka ah iyo alaabooyin kale, 10 milyan oo nooc oo ah qalabka wax lagu jaro godadka carbide ee sibidhka ah. NCC waxay leedahay 611 shaqaale iyo raasumaal diiwaangashan oo ah RMB 279.4 milyan.
Ruux Ganacsi: Ugu adeeg macaamiisha shaqo adag
Ku guuleysto mustaqbalka tayada
Xaqiijiyay oo Shahaadaysan ：
Waxaan ahmiyad gaar ah siineynaa tayada wax soo saarkeena. Waxaad markasta isku halleyn kartaa xalalkeena. Heerka ISO 9001 wuxuu dejinayaa shuruudaha ugu yar ee nidaamka maaraynta tayada. Iyada oo ku saleysan tan, waxaan si joogto ah u hagaajineynaa hawlaheena gudaha. Sidan ayaan kuugu balan qaadeynaa kan ugu fiican tayada wax soo saarka, wax soo saarka iyo tartanka. Waxaan leenahay xisaab xir joogto ah oo la sameeyo si loo xaqiijiyo tan.
NCC waxay si adag u fulisaa nidaamka ISO 9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada, waxayna fulisaa dhamaan nidaamka masuuliyada tayada shaqaalaha si loo hubiyo adeeg joogto ah oo hufan macaamiisha.
Inspection Baadhitaanka maaddada iyo oggolaanshaha
Inspection Baadhitaanka cabbirka iyo oggolaanshaha
Certificate Shahaadada qalabka oo la soo saaray codsi kasta
Analysis Falanqaynta muunada macaamiisha waa la heli karaa
Waxaan haynaa qalab aad u horumarsan iyo injineero khibrad leh, iyo wax soo saar kasta oo shaqsi ah ayaa lagu tijaabiyaa inta lagu jiro wareegga wax soo saarkeeda si loogu waafajiyo qeexitaankiisa horay loo sii qorsheeyay.
Nidaamkeena hubinta tayada wuxuu hubiyaa in kaliya alaabada ugufiican la geyn karo macaamiisheeda dhamaan gaarsiinta markastana waa waqtigeeda.
Waaxdeena Cilmi baarista & Horumarinta waxay had iyo jeer u heellan tahay sameynta sida ugu fiican ee khibradooda ku saabsan tikniyoolajiyadda horumarsan iyo alaabada si ay si wanaagsan ugu adeegaan baahiyaha jira iyo kuwa mustaqbalka ee macaamiisha. NCC waxay had iyo jeer ilaalisaa booska horumarsan ee awooda farsamada R&D ee Shiinaha, waxayna leedahay xarun tiknoolajiyad heer gobol ah, iyo waliba xarun falanqeyn iyo tijaabo ah, iyadoo 112 shaqaale ay heystaan ​​darajooyin sare oo xirfadeed iyo farsamo, shahaadada mastarka ama wixii ka sareeya.
NCC waxay samaysay shaybaar xirfadlayaal ah oo lagu baaro sifooyinka iyo cabiraada budada tungsten carbide iyo alloys tungsten carbide, sheybaar xirfadlayaal ah oo kujira baaritaanka qalabka kalagoynta qalabka si loo sameeyo baaritaanka axwaareynta isbarbardhiga ee walxaha carbide ee sibidhka ah.
NCC waxay leedahay xarun tiknoolajiyad-kabaal-goboleed, oo kaqeyb qaadatay dib-u-eegista iyo sameynta 12 heer qaran oo lahelay 18 shatiyada shatiga ah, oo ay kujiraan 3 shatiyada hal abuurka iyo 15 shatiyada nooca utility.
Dhanka kale, Waxaan dhisnay iskaashi farsamo oo muddo-dheer ah oo xasilloon jaamacado badan oo muhiim ah iyo machadyo cilmi-baaris oo caan ah.
Ujeeddadu waxay tahay in aan la kulanno baahida shaqsiyadeed ee bahwadaagtayada, waxaan si joogto ah u raadineynaa siyaabo aan ku horumarin karno kuna abuuri karno qalab goyn qiimo leh oo yareynaya qiimaha iyo kordhinta wax soo saarka, xitaa xaaladaha ugu adag
NCC, habka wax soo saarku waa mid dhameystiran oo jaango'an, laga bilaabo budada ceeriin ee la sifeeyay ilaa meelaha ugu dambeeya ee jilicsan.
Ma jiraan wax dadaal ah oo ka haray waaxdayada R&D Dept., shirkadduna guud ahaan waxay ka shaqeysaa inay bixiso meelo bannaan oo kala jaban oo kordhiya waxsoosaarka, yareynaya qiimaha macmiilka isla markaana ka caawinaya sidii loo abuuri lahaa badeecooyin lagu kalsoon yahay
Marka aan nahay NCC, waxaan ku adkeysaneynaa in caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaheennu ay muhiim yihiin oo ay leeyihiin mudnaanta koowaad isla markaana ay aasaas u yihiin ficiladayada. Waxaa naga go'an ilaalinta deegaanka iyo maaraynta si adag ayaa loo qabtaa iyadoo la raacayo nidaamka maareynta deegaanka ee ISO 14001.
Mashiinka Mashiinka, Carbide Cemented, Qalabka Jarista Carbide, Dhuxulada Dhamaadka Carbide Solid, Qalabka Carbide, Cemented Carbide Endmill,